बि लामिछानेको “द लिडर”मा यसकारण आएनन रमेश खरेल ! जर्ज बारे बल्ल बोले रबि लामिछाने ….(भिडियो सहित) «
बि लामिछानेको “द लिडर”मा यसकारण आएनन रमेश खरेल ! जर्ज बारे बल्ल बोले रबि लामिछाने ….(भिडियो सहित)
Published : 12 February, 2020 1:33 pm
केहि समय अघि संसारकै पहिलो र फरक किसिमको भनिएको रियालिटी शो ‘द लिडर’ले नयाँ थप २ जना निर्णायक पाएको छ। पत्रकार रबि लामिछानेले संचालन गर्ने सो कार्यक्रमको लागी थप २ निर्णायकमा विद्वान् नेता द्वय प्रदिप गिरि र प्रदीप नेपाललाई पक्का भएका छन ।
उक्त शो हाक्ने ५ जना निर्णायकहरु मध्य ३ जना निर्णायकहरु पुर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, पुर्व पत्रकार तथा नेता रविन्द्र मिश्र, पुर्व प्रधानन्यायाधिस शुशिला कार्कीको नाम भने दुई महिना अगाडी नै सार्वजनिक गरीएको थियो।
दुई जना निर्णायकहरु भने पब्लिक च्यवाइसका आधारमा ल्याउने भनिएको थियो। तीन जना निर्णायक पाएको ‘द लिडर’ले झन्डै दुई महिनापछि आज उक्त टिमले पूर्णता पाउदै छ। प्रतिस्पर्धीबाट ‘द लिडर’ का विजेतालाई काठमाण्डौमा अपार्टमेन्ट, गाडी र २० लाख रुपैयाँबाट पुरस्कृत गरिने छ ।
कोरोना भाइरसका कारण अहिले संसारका धेरै देशहरु लकडाउनमा छन् । तर वैज्ञानिक भाषामा भन्नुपर्दा संसारलाई
४ बर्ष देखि दिशा,पिसाब ओछयानमै ! छोराछोरीले कुट्छ, भाग्य न्यौपाने र कृष्ण कंडेललाई हजारौ पटक